देउवा-सिटौला गठबन्धनलाई पराजित गर्दै मोरङ काँग्रेसमा कोइराला पक्षका लिम्बू विजयी
१९१३ पटक पढिएको
इटहरी : नेपाली काँग्रेस मोरङको सभापतिमा शेखर कोइराला पक्षका डिग बहादुर लिम्बू विजयी भएका छन् । १२ गते सम्पन्न निर्वाचनमा कुनै पनि उम्मेदवारले ५० प्रतिशत भन्दा बढी मत ल्याउन नसकेपछि १४ गते भएको निर्वाचनमा लिम्बू विजयी भएका हुन् ।
नेपाली काँग्रेसको विधानको धारा १२ को उपधारा ५ (क) २ अनुसार सभापति विजयी हुन ५० प्रतिशत भन्दा बढी मत प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ । ५० प्रतिशत भन्दा बढी मत ल्याउन नसके खण्ड (क) ३ बमोजिम पुनः मतदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
सोही बमोजिम पहिलो र दोस्रो भएका उम्मेदवार बिच पुनः निर्वाचन प्रतिस्पर्धा भएको थियो। कोइराला पक्षका लिम्बू र संस्थापन प्यानलका दिलीप गच्छदारको बिच भएको प्रतिस्पर्धामा लिम्बुले भारी मतान्तरले विजय हासिल गरेका छन् । लिम्बूले १ हजार ९ सय ६ मत ल्याउँदा गच्छदारले १ हजार ४ सय २२ मत ल्याएका थिए ।
यसअघिका तेस्रा उम्मेदवार कृष्ण प्रसाद सिटौला पक्षका यदुकुमार विष्टले गच्छदारलाई समर्थन गर्ने बताए पनि त्यसको कुनै प्रभाव देखिएन । कोइराला पक्षकै मत पाएका उनले गच्छदारको पक्षमा मत ल्याउन सकेनन् ।
लिम्बूको अघिल्लो कार्यकालमा काँग्रेस धेरै कमजोर भएको भन्दै उनले विधि र विधान अनुसार पार्टी सञ्चालन गर्न आग्रह गर्दै गच्छदारलाई शुभकामना दिएका थिए । २५ बर्सदेखि कोइराला प्यानलबाटै राजनीति गरेका उनले निर्णायक समयमा देउवा पक्षलाई समर्थन गरेका हुन ।
पूर्व महामन्त्री तथा प्रदेश १ काँग्रेसको निर्वाचन संयोजक रहेका सिटौला सोमबार बिहानै देखी विराटनगर पुगेर कोइराला प्यानल विरुद्ध लागेका थिए । केन्द्रीय सभापतिको दाबी गरिरहेका कोइरालाकै गृह जिल्लामा सिटौलाको उपस्थिति अर्थपूर्ण देखिएको थियो । इतर प्यानलबाट सर्वसम्मत उम्मेदवार हुने दाबी गर्दै आएका कोइरालाको लागी सिटौलाको उपस्थिति चुनौतीपूर्ण मानीएपनि त्यो हुन सकेन । १३ औँ महाधिवेशनको दोस्रो चरणको निर्वाचनमा देउवालाई सघाएका सिटौलाले मोरङमा पनि त्यसैलाई निरन्तरता दिएका छन् ।
सिटौला मात्र नभई विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर भीम पराजुलीले पनि देउवा टिमका उम्मेदवार गच्छदारलाई समर्थन गरेका थिए । लामो समय कोइराला टिमबाट राजनीति गरेका उनले अन्ततः देउवा टिमका उम्मेदवारलाई सघाएका हुन् ।
केन्द्रीय सदस्य अमृत अर्याल र राष्ट्रियसभा सदस्य रमेशजंग रायमाझीले रणनीतिक अभियान चलाएका छन् । उता डाक्टर शशाङ्क कोइराला निकट डा.मिनेन्द्र रिजाल पनि डा. शेखर प्रति त्यति उदार देखिएका छैनन् । शेखर सँग भन्दा देउवा सँग निकट सम्बन्ध रहेका उनीहरूले गच्छदारलाई नै समर्थन गरेका हुन् । त्यस सँगै महेश आचार्यले पनि गच्छदारको पक्षमा भोट मागेका थिए ।
सुरुवात देखी नै आलोचक देखिएका कोइरालालाई गृह जिल्लामै कमजोर बनाउने देउवा रणनीति असफल भएको छ । गृह जिल्लामा विजय हासिल गरेसँगै कोइराला शक्तिशाली भएका छन् ।
मोरङ काँग्रेस सभापतिमा पुनः निर्वाचन, गच्छदारलाई विष्टको समर्थन
राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा गठबन्ध .....
धरान जेसीजको अध्यक्षमा प्रतीक .....
धरानमा ११३ सहित प्रदेश एकमा १० .....
७० औँ अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार द .....
६ लेनको सडक बिस्तारकालागि दुहब .....
कोरोनाको कारण जिल्ला प्रशासन क .....
बिपीमा सरकारको अनावश्यक हस्तक् .....
नयाँ रियालिटी शो 'सिङ्गर' को घ .....
राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा गठबन्धनको ज ...
धरान जेसीजको अध्यक्षमा प्रतीक श्रेष ...
धरानमा ११३ सहित प्रदेश एकमा १०१६ जन ...
७० औँ अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसको ...
६ लेनको सडक बिस्तारकालागि दुहबीमा ब ...
कोरोनाको कारण जिल्ला प्रशासन कार्या ...
बिपीमा सरकारको अनावश्यक हस्तक्षेप र ...
नयाँ रियालिटी शो 'सिङ्गर' को घोषणा, ...
सबैले 'किरात-लिम्बुवान' वा 'किरात-ख ...
धरान-९ मा कर्जा तथा जोखिम व्यवस्थाप ...
मुख्यमन्त्री कार्यालयका नौ जनामा को ...
बिपी प्रतिष्ठानको कोभिड अस्पतालमा उ ...
सामूहिक बलात्कार घटनाको अधिकारकर्मी ...
बीपीमा सरकारले पठाएका डा. श्याम सुन ...
धरानमा १२१ जना सहित प्रदेश १ मा १२८ ...
धनकुटामा हत्या गरेर घर भित्रै पुरेक ...
झापाको अर्जुनधारा नगरपालिकाबाट प्रव ...
इटहरीको बुल्स एलेभेन क्लबद्वारा सवा ...
मोरङको सुन्दरहरैचामा सामूहिक बलात्क ...
इटहरी उपमहानगरद्वारा ३८ दलित विद्या ...
प्रदेश एकमा छ महिनामा ३ हजार ६ सय २ ...
झापामा ११९ सहित प्रदेश एकमा ६७३ जना ...
कोसी देखि मेची पुलसम्म, जोगवनीदेखि ...
बीपी प्रतिष्ठानका २१६ जना स्वास्थ्य ...
गुडिरहेको बोलेरो माथि ढुङ्गा खस्यो, ...
पिडा बुझेर हेर ...
धरानको पिण्डेश्वर मन्दिर परिसरमा सा ...
सुनसरीको भोक्राहा-३ मा नेकपा एस सङ् ...
धरानमा १२५ सहित प्रदेश १ मा ७०२ जना ...
धरानका औषधी पसलहरुमा पनि सिटामोल अभ ...
मुसहरले अस्वीकार गरे इटहरी उपमहानगर ...
स्थानीयबासीको गुनासो सुन्न धरान उपम ...
धरानमा १३० जना सहित प्रदेश १ मा ११३ ...
करेन्ट लागेर १ जनाको मृत्यु ...
बीपीको कोभिड अस्पतालमा ३ जना कोरोना ...
धरानमा जग्गाको विषयमा सौतेनी आमा छो ...
साथी खोज्दै पुगेका हतियारधारी समूहल ...
ट्रक 'ब्याक' गरेर इटहरीकी एक महिलाक ...
धरानमा दिनहुँ खुकुरी हानाहान : दुई ...
सर्दु खोला झडप : हर्क साम्पाङ पक्षक ...
३ अर्बको लगानीमा इटहरीमा खुल्यो नेप ...
सामूहिक हत्या भएको एक दिन पछि मृतकक ...
चाइनिज स्याउ तस्करी प्रकरण : तस्करी ...
भोलिदेखि माघ १५ गतेसम्म विद्यालय बन ...
संवाददाता बिनय बाह्रकोटी (ईटहरी)
सुदिप अधिकारी (झापा)
Copyright © 2018 / 2022 - Kapurinews.com All rights reserved